အကြောတက်တတ်သူတို့ ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်သင့်သလဲ . . . – Healthy Life Journal
Posted on ဇူလိုငျ 1, 2019
မေး. ကျွန်မက အတက်စာတွေ စားမိရင် အရမ်းအကြောတက်တတ်ပါတယ်။ အကြောတက်တိုင်းလည်း ဆေးမသောက်ပါဘူး။ ဆေးသောက်တာ များလာရင်ကော ဆေးယဉ်ပါးမှုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ ဆေးယဉ်ပါးမှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆရာ။ အကြောမတက်အောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်နဲ့ အနေအထိုင်တွေကို ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဘယ်အစားအသောက်တွေက အကြောပိုတက်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. မြေအောင်းဥ၊ မျှစ်၊ မှို၊ တညင်းသီး၊ ငါးသလောက်၊ ငါးဥစတဲ့ အကြောတက်တတ်တဲ့ ဒီအစာတွေက သွေးတွင်းယူရစ်အက်စစ်ကိုလည်း များစေတဲ့အစာတွေဖြစ်နေပြီး ဂေါက်အဆစ်အမျက်ရောင်ရောဂါ (Gout) ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆစ်နာတာဆိုတော့ အဆစ်နဲ့ နှီးနွှယ်ပြီး အကြောတက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောတက်တတ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။
အများအားဖြင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းလို့ အကြောတက်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုမရှိလို့ အကြောတက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူလတ်ပိုင်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ လှုပ်ရှားမှုက နည်းလာတတ်ပါတယ်။ အကြာကြီးထိုင်တာ၊ စာကို အကြာကြီးဖတ်တာ၊ ကားအကြာကြီး မောင်းတာတွေလို အထိုင်များတဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့်လည်း အကြောတက်တတ်ပါတယ်။ ထိုင်တဲ့အခါ ခါး၊ လည်ပင်းတွေ စောင်းနေ၊ လိမ်နေတာကြောင့်လည်း အကြောတက်တတ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါ၊ ကားမောင်းတဲ့အခါတွေမှာ အနေအထိုင်ပုံစံကို မှန်အောင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် အကြာကြီး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အနားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်တာ၊ ရေကူးတာ စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်နေ့ မိနစ် ၃၀-၄၅လောက် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်နိုင်ရင် မိနစ် ၃၀ လောက် လမ်းလျှောက်ပေးရင်လည်း ရပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ငါးရက်လောက်လုပ်ပေးရင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆေးယဉ်ပါးတယ်ဆိုတာ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး (Antibiotics)တွေကို ဆေးပတ်လည်အောင် မသောက်တာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေက ယဉ်ပါးလာပြီး ဆေးယဉ်တာမျိုးကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဆေးတွေကတော့ ခဏခဏသောက်နေရင် နောက်ပိုင်းမှာ သောက်ရတဲ့ ဆေးပမာဏ (Dose)ကို တိုးမြင့်လာရတဲ့ သဘောမျိုးတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related Items:aches, Food, muscle pain